Faah faahin Weerar iyo Rasaas xoogleh oo xalay ka dhacday Baladweyne – SBC
Faah faahin Weerar iyo Rasaas xoogleh oo xalay ka dhacday Baladweyne
Posted by Webmaster on February 14, 2012 Comments
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weerar habeenimadii xalay lagu qaaday fariisin ciidamada Dowlada Itoobiya ay ku leeyihin magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan.
Weerarka oo ahaa mid aad u xoogan islamakaana siweyn loogaga dareemay qeybaha xaafadaha ku yaala magaaladaas ayaa waxaan ilaa iyo iminka la xaqiijin karin cida ka dambeysay inkastoo ay jiraan tuhuno ku aadan in ay ka dambeeyeen Xarakadii Alshabab ee meesha gacanta ku heynjirtay maadaama ay colaadi kala dhaxeyso ciidamada Itoobiyaanka ah.
Dadka deegaanka oo lahadlayay Xafiiska SBC International ee Garoowe ayaa sheegay in saaka markii uu waagu baryay lagu arkay goobihii uu weerarku ka dhacay ee degmada Howlwadaag ee magaaladaas dad gaaraya ilaa 5 qof oo meyd ah kuwaasi oo aan la aqoon waxa ay yihiin iyo cida ay ka tirsanaayeen.
Majiraan warar intaasi raafsiisan oo ka soo baxaya dhinacyada Ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalida ah ee xalay weerarka loo geystay, waxaanse sidoo kale jirin cid sheegatay weerarkaasi in ay ka dambeeysay.
Inkastoo aan aheyn markii ugu horeysay oo weerar noocaan ah loo geysto fariisimada ciidamada ku sugan baladweyne ayaa hadana waxaa uu ahaa weerarkii xalay mid aad u xoogan la iskuna adeegsaday rasaas culculus .